အတတ်ပညာ တရုတ် ATC သစ်သား cnc 1325 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. ကိရိယာ ဆယ့်နှစ်ခုကို မျဉ်းဖြောင့် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသည့် မဂ္ဂဇင်းများအတွက် သီးသန့်ထားရှိပြီး ပိုမိုအားကောင်းသည့် လုပ်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည့်မီရန် ကိရိယာဆယ့်နှစ်ခုကို လွတ်လပ်စွာ အစားထိုးနိုင်သည်။
2. နောက်ဆုံးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်တွင်၊ lamino opener ၏အားသာချက်များကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည့် lamino invisible connection assembly process မှ ရရှိလာပါသည်။lamino invisible connection ၏ အားသာချက်များသည် lamino opener ကို တွင်ကျယ်စွာ လူကြိုက်များစေသည်။အခြားသော မမြင်နိုင်သောလင့်ခ်ပုံစံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက lamino မမြင်နိုင်သောချိတ်ဆက်မှု၏ တပ်ဆင်မှုပုံစံသည် တပ်ဆင်ရန်နှင့် စုစည်းရန် ပို၍အဆင်ပြေသည်။ချိတ်ဆက်ထားသောအပိုင်းကို လခြမ်းအချောင်းထဲသို့ထည့်ရန်သာလိုသည်၊ ပြားနှစ်ပြားကို တပြိုင်နက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖိထားပါ ဒါဒါပါပဲ။
3. မမြင်နိုင်သော lamino အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပရိဘောဂများ တပ်ဆင်ရန် အချိန်တိုတောင်းပြီး လူ 1-2 ဦးသည် ပရိဘောဂတစ်ခုလုံးကို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး အချိန်နှင့် လုပ်အားကို သက်သာစေပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ Lamino ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။
4. lamino connector ၏အလှတရားများ- အောင်မြင်သောသော့ခတ်မှုယန္တရား၊ လှပသောဒီဇိုင်း။ခိုင်မာမှု- ဆန်းသစ်သော မြှုပ်သွင်းနည်းပညာ၊ ခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှု၊လွယ်ကူစွာ ဖြုတ်တပ်ခြင်း- ရိုးရှင်းသော စုဝေးမှု နှင့် တပ်ဆင်မှု အကြိမ် အကန့်အသတ်မရှိ၊လုံးဝမမြင်နိုင်သော --- ကက်ဘိနက်သည် ဘက်စုံမမြင်နိုင်သော၊ အမှန်တကယ် အရည်အသွေးမြင့်သည်။စွယ်စုံရ --- တီထွင်ဖန်တီးမှု အလုံးစုံထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု၊ မည်သည့်ပန်းကန်ပြားကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Lamino machining centre ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ပရိဘောဂများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အထူးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် သမားရိုးကျ လက်ဖြင့်ဖြတ်ခြင်းမုဒ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး လူလုပ်အားကို အားကိုးနိုင်သည်။၎င်းသည် ဒီဇိုင်း၊ ဖြုတ်တပ်ခြင်းနှင့် စာစီစာရိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အသိဉာဏ်ရှိသော ထုတ်လုပ်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။Lamino မမြင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများသည် panel ပရိဘောဂချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။panel ပရိဘောဂများ၏ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံသည် 3-in-one connector ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။Three-in-one သည် panel ပရိဘောဂများ၏ လိုအပ်သောဖွဲ့စည်းပုံဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။သို့ရာတွင်၊ ဖောက်သည်၏စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အ၀မပြည့်မီနိုင်သော သုံးခုပေါင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် အမှန်တကယ်အသုံးပြုရာတွင် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိသည်။အထူးသဖြင့် နံရံစောင်းဗီရိုများ သို့မဟုတ် ထောင့်စောင်းဗီဒိုများ ပြုလုပ်ရန် ဖောက်သည်များက တောင်းဆိုသောအခါတွင်၊ သုံးပုံတစ်ပုံကို ထောင့်မှန်မှသာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Longteng တတိယမျိုးဆက် R20 - လွှဓါး + Linear ATC CNC Router
(အရှည် 2800 စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်)
GDZ 9KW*1+ လွှဓား
ကိရိယာ 12 ခု (ကိရိယာ 16 ခု စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးသည်)
Dorna 1500W ဝတ်မော်တာ
ထိုင်ဝမ် syntec စနစ်
TBI Original 25 စတုရန်းရထား
TBI 2510 Ball ဝက်အူ
တတိယမျိုးဆက် Longteng မူပိုင်ခွင့်ဖွဲ့စည်းပုံ (လွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့)
လေးလံသော အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကုသခြင်း ဂဟေကုတင် (ငါးမျက်နှာကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်း တိကျမှု 0.02 မီလီမီတာ)
Crossbeam ထူထပ်သော နံရံစတုရန်းပိုက်နှင့် စတီးအမြှောင်းများ ဂဟေဆက်ခြင်း ကော်လံ၏ သွန်းထည်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလုံးကို synchronous bed machining နည်းပညာ
Longteng မူပိုင်ခွင့် ဗီရိုစီးရီး၊ အပြည့်အ၀ အလုံပိတ် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး လည်ပတ်မှု ဗီရို
z ဝင်ရိုး အစိတ်အပိုင်းများ
Z ဝင်ရိုးမော်တာသော့ခတ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ Z ဝင်ရိုးမော်တာဝက်အူပံ့ပိုးမှုထိုင်ခုံ
မူပိုင်ခွင့်ဒီဇိုင်း 50MM စုပ်ယူနိုင်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ PVC ပိုက်ချိတ်ဆက်မှု တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ကောင်းမွန်ပြီး ပန်းကန်ပြားကို မလည်ပတ်စေပါ။
အလူမီနီယံ ကန့်လန့်ကာဖြင့် ထုပ်ပိုးမှုနေရာချထားခြင်း ဆလင်ဒါနှစ်ထပ်
အလိုအလျောက် ကြွေပြားအပြည့် အလျားလိုက် တွန်းလှန်ထားသော ခါးပတ် အရန် အလူမီနီယံဘား လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရပ်တန့်ပါ။
အလိုအလျောက် ဗိုင်းလိပ်တံ အပိုင်းပိုင်းခွဲခြင်း ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဒုတိယဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားခြင်း။
ယခင်- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်လေးခု R4 သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
နောက်တစ်ခု: 1325 linear ATC ပါသော ချည်လုံးလေးလုံး
ကြော်ငြာ Mini Cnc Router ရောင်းချသူ
လက်ကား 1325 Atc လုပ်ငန်းစဉ်သုံး Cnc Router စက် ပေးသွင်းသူ